Power Load | Telenor Myanmar
Prepaid ဆင်းကဒ် အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းဖြစ်လို့ ဒီနေ့ပဲ Power Load မှ အကောင်းဆုံး အစီအစဉ်များဝယ်ယူလိုက်ပါ။
ဒေတာတွေသယ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ ရှယ်စုဘူးအစီအစဉ်၊ ဖုန်းဘေလ် ၆ ဆ အထိရရှိမဲ့ စူပါထောအစီအစဉ် နှင့် ၁ စက္ကန့်နှုန်းထားဖြင့်သာ ကောက်ခံမည့် အသက်သာဆုံး Voice အစီအစဉ်အသစ်များ ပါဝင်သော Power Load (*555#) အစီအစဉ်သစ်များဖြစ်ပါသည်။
ရှယ်စုဘူး ၏ ကျန်ရှိနေသော ဒေတာတွေများကို သက်တမ်းကုန်ပြီး ၇ ရက် အတွင်း ထပ်မံဝယ်ယူ၍ သယ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။
*555# ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
Power Load အစီအစဉ်သစ်မှာ ဘာတွေထူးခြားသွားပါသလဲ?
*ရှယ်စုဘူး ၏ ကျန်ရှိနေသော ဒေတာတွေများကို သက်တမ်းကုန်ပြီး ၇ ရက် အတွင်း ထပ်မံဝယ်ယူ၍ သယ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။
*555# ကိုခေါ်ဆိုပါက သုံးစွဲသူအနေဖြင့် မည်သို့မြင်တွေ့နိုင်ပါသနည်း?
*555# ကိုခေါ်ဆိုပြီးနောက်တွင် သုံးစွဲသူအနေဖြင့် USSD menu မှတဆင့်အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်များကို မြင်တွေ့ရပါမည်။
Menu အသစ်မှာ ပါဝင်မဲ့ “စူပါထော” အစီအစဉ် ကဘာလဲ?
သုံးစွဲသူအနေဖြင့် စူပါထော ၁၀ဝ၀ ကိုဝယ်ယူလိုက်ပါက ၆ဆ အနေဖြင့်စူပါထောပမာဏ ၆၀ဝ၀ကျပ် ရရှိနိုင်ပါသည်။
အသက်သာဆုံး Voice အစီအစဉ်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာတွေလဲ?
အကျိုးကျေးဇူးအနေဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတိုင်းကို အသက်သာဆုံးဖြစ်တဲ့ ၁ စက္ကန့်နှုန်းဖြင့်သာ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်တဲ့အတွက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းထိ ပိုပြီးသက်သာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစီအစဉ် အပြောင်းအလဲရှိပါသလား ?
အခါအားလျော်စွာ အစီအစဉ် အသစ်များ ပြောင်းလဲဖော်ပြသွားမည်ပါသည်။
Post-paid အသုံးပြုသည့် customers များ Power Load ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသလား?
ယခု Power-Load အစီအစဉ်မှာ Prepaid စနစ်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် Customer များအတွက်သာ ဖြစ်ပြီး Postpaid စနစ်အသုံးပြုသော customer များအတွက် ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
*555# ကိုခေါ်ဆိုပါက ရောင်းချသူ (POS) အနေဖြင့် မည်သို့မြင်တွေ့နိုင်ပါသနည်း ?
ရောင်းချသူ (POS) အနေဖြင့် *555# ကိုခေါ်ဆိုပြီး သုံးစွဲသူ ၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်တွင် အောက်ဖော်ပြပါအစီအစဉ်များကို မြင်တွေ့နိုင်ပါမည်။ ဥပမာ -
999Ks-925MB-30D (x% COMM)
999Ks-5500Sec-15D (x% COMM)
1000Ks-6000Ks-15D (x% COMM)
700Ks-7800Sec-7D (x% COMM)
2999Ks-2850MB-30D (x% COMM)
5999Ks-5700MB-30D (x% COMM)
(မှတ်ချက်: အထက်ဖော်ပြပါ ရွေးချယ် ၆ ခုမှာ USSD menu ပေါ်တွင်အစဉ်လိုက်ရှိနေမည် ဖြစ်သော်လည်း စာမျက်နှာများရွှေ့ပြောင်းကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါမည်။ ယင်းကဲ့သို့ စာမျက်နှာများ ကွဲပြားမှုရှိနေရခြင်းမှာ USSD menu ပေါ်မှ စာလုံးရေအကန့်အသတ်နှင့် အသုံးပြုသည့် မိုဘိုင်း device အပေါ်မူတည်သောကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ စာမျက်နှာများ ရွှေ့ပြောင်းဖို့ရန်လိုအပ်ပါက “# Next” ရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်မည့် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါမည်။)
အဓိက POS menu နှင့် Customer menu ကွာခြားမှုမှာ POS menu တွင် ကော်မရှင်ကိုပါ တစ်ပါတည်းမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး အခြားရွေးချယ်မှု (နံပါတ် ၉) တစ်ခုကို ပါမြင်တွေ့ရပါမည်။ ရွေးချယ်မှု နံပါတ် ၉ မှာ အပိုဆုအစီအစဉ်မဟုတ်သည့် အခြားပုံမှန်ငွေဖြည့်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက် ဖြစ်ပြီး ယင်းရွေးချယ်မှုအတွက် လက်ရှိအချိန်တွင် POS ကော်မရှင် သီးသန့် မရှိပါ။
POS အနေဖြင့် Power Load မှတဆင့် ရောင်ချပေးသော အစီအစဉ်တွေအတွက် ဘယ်လို အကျိုးအမြတ်တွေ ရရှိနိုင်ပါသနည်း ?
သက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်ပမာဏများကို အစီအစဉ်များနှင့် တကွ မြင်နိုင်ပါသည်။
ဥပမာ- 999Ks-1000MB-30D (5% Comm)
ကိုရောင်းချပါက ရောင်းချမှုဈေးနှုန်း ၏ ၅% ရရှိနိုင်ပါသည်။
ရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ် ၉ မှာမူ Power Load ရပိုင်ခွင့်များမဟုတ်သည့် အခြား E-Load ငွေဖြည့်ပမာဏများအတွက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအမှတ်စဉ်နံပါတ် ၉ အတွက်မူ သီးသန့်ကော်မရှင် ခံစားခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
(မှတ်ချက်။ အထက်ပါ ကော်မရှင်သတ်မှတ်ချက်များမှာ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဌာနများမှ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မူအတွက် ထပ်မံမကြေငြာမီအထိ ဖြစ်ပါသည်)